ဒုက္ခသည်များအတွက်ထိပ်တဆယ်အလုပ်အကိုင်များ: အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှု | USAHello | USAHello
အစားအစာဝန်ဆောင်မှုတွေကိုကူညီနေတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်ဟုခေါ်သည်, စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေရေး. ပိုပြီး 14 လူဦးရေသန်းအစားအစာဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အလုပ်လုပ်, အများစုအလုပ်အကိုင်များကိုအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ထက်ရရှိရန်ပိုမိုလွယ်ကူများမှာ. အမေရိကန်တွေမိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူစားရန်ထွက်သွားပျော်မွေ့သောကွောငျ့အစားအစာဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းကြီးထွားလာနေသည်.
အစားအစာဝန်ဆောင်မှုလက်ထောက်နေရာများကိုအမျိုးမျိုးအတွက်ဖောက်သည်အစားအစာနှင့်အချိုရည်များကို ပြင်ဆင်. ဝတ်ပြု, ကော်ဖီဆိုင်များအနေဖြင့်စျေးကြီးစားသောက်ဆိုင်များ. သူတို့ကလည်းဥပဒေကြမ်းများနှင့်အတူကူညီခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မီးဖိုချောင်စောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်.
တစ်ဦးကစားသောက်ဆိုင်ထမင်းချက်ကဖေးသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့စားသောက်ဆိုင်အတွက်အစားအသောက်ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်တဲ့သူတစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်. သူတို့ဟာအရာရာကိုလုပ်ပေး, အပြည့်အဝအစားအစာများချက်ပြုတ်ရန်ပါဝင်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရာမှ. ပိုကြီးတဲ့စားသောက်ဆိုင်ထဲမှာ, သူတို့ကအသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့တခြားတာဝန်များကိုပြင်ဆင်နေအများဆုံးအတွေ့အကြုံရှိစားဖိုမှူးကကူညီ.
စားပွဲစောင့်ဆိုင်းနေသူ Work မီနူးကိုဖော်ပြရန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, အမိန့်ကိုယူပြီးနှင့်အစားအစာ်ထမ်းဆောင်. ဒါဟာလူထုနှင့်ဆက်ဆံရာတွင် likes သူအထွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အတူတစ်ယောက်ယောက်ကိုအဘို့အကောင်းတစ်ဦးအလုပ်င်. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ, သူတို့ရဲ့လုပ်ခလစာအပြင်တင်ရန်ဆာဗာများ. ရှာဖှေတှေ့ ဘယ်လိုစားသောက်ဆိုင်တစ်ဦးကိုကျွန်ခံစေ.
တစ်ဦးကအမဲသတ်သမားဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များဘို့ပညာရှင်ပီသစွာအမဲသားကိုလျှော့ချ. ကိုပြင်ဆင်သားသတ်သမား, စျေးနှုန်းနှင့်ပြပွဲအသားထား. သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တာဝန်များကိုနီးစပ်သူအာရုံကိုအာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်ပေးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်.
“ထမင်းချက်ခေါင်း” ဒါဟာလေ့ကျင့်သင်ကြားနေတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စားဖိုမှူးများအတွက်အခြားအမည်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါစားဖိုမှူးချက်ပြုတ်နည်းများကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်ချက်ပြုတ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများခြေရာခံစောင့်ရှောက်ဖို့အသေးစိတ်ဖို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုရှိရမည်. တချို့ကစားဖိုမှူးဝက်အူချောင်းသို့မဟုတ်ကင်အစားအစာအတွက်အထူးပြု. pastry စားဖိုမှူးကိတ်မုန့်နှင့်အချိုပွဲအတွက်အထူးပြု. တစ်ဦးက sous စားဖိုမှူးအများအပြားတာဝန်များကိုနှင့်အတူအလုပ်အမှုဆောင်စားဖိုမှူးနှင့်အကူအညီနဲ့၏ညှနျကွားမှုအောကျတှငျအလုပ်ဖြစ်တယ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်.
Host ကသို့မဟုတ် acomodador
တစ်ဦးကအိမ်ရှင်သို့မဟုတ် acomodador သံသယကိုင်တွယ်နှင့်၎င်းတို့၏စားပွဲမှဧည့်သည်များကကြိုဆို, ဒါဟာသူတို့ကိုတစ်ဦး menu ကိုပေးသည်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့ကိုသက်သာခံစားရစေသည်. အိမ်ရှင်သို့မဟုတ် acomodador အလုပ်ကနဦးအဆင့်တွင်တစ်ဦးအလုပ်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်အလုပ်ရှင်များအကြီးအတှေ့အကွုံနဲ့ဖော်ရွေခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုရှာခြင်း.
စားသောက်ဆိုင်မန်နေဂျာတစ်ခုလုံးကိုစားသောက်ဆိုင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အရာခပ်သိမ်းချောချောမွေ့မွေ့ပြေးသေချာစေသည်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်. ဝန်ထမ်းကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ, ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများတောင်းခံ, တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့ဖောက်သည်များနှင့်လက်ကိုင်စျေးကွက်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း. ရှာဖှေတှေ့ ဘယ်လိုစားသောက်ဆိုင်မန်နေဂျာဖြစ်.
အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အလုပ်သငျသညျဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနောက်ခံကနေလူတို့နှင့်အတူဆက်ဆံခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါအလုပျ hectic နိုင်ပါတယ်, တခါတလေ, တချို့ဖောက်သည်ကိုင်တွယ်ရန်ခက်ခဲဖြစ်မည်အကြောင်း. ဖိအားများနှင့်တစ်ဦးအပြုသဘောအောက်မှာအေးဆေးနေပါကဤအပြေးပြိုင်ပွဲအတွက်လူတို့အဘို့အသှေးကောငျးများမှာ. သင်သည်သင်၏အလုပ်အချိန်စာရင်းနှင့်ကျောင်းနှင့်အတူကပေါင်းစပ်နိုင်အောင်အတော်များများအစားအစာဝန်ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အချိန်ဇယားပူဇော်, မိသားစုနှင့်အခြားလှုပ်ရှားမှုများ.
careeronestop.org အတွက်ကိုယ်ပိုင်အကဲဖြတ်စမ်းသပ်ခြင်း Perform
အင်္ဂါရပ်များ BOX: အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုများ၏အနာဂတ်: သင့်ကိုယ်ပိုင်သူဌေးဖြစ်!
သငျသညျအစာကိုဝန်ဆောင်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုစတင်ရန်ချင်ပါတယ်? သင်တစ်ဦးအထူးအစားအစာရှိသည် Do – မူရင်းကိုသူတို့နိုင်ငံကနေဖြစ်ကောင်းရိုးရာအစားအစာ?
စားနပ်ရိက္ခာကုန်တင်ကားသငျသညျအစာကိုချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်အစေခံရန်ခွင့်ပြုကြောင်းမိုဘိုင်းမီးဖိုချောင်များမှာ. စားနပ်ရိက္ခာကုန်တင်ကားလောလောလတ်လတ်ပြုတ်အစားအစာအစေခံ, မကြာခဏတိုင်းရင်းသားဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူ- မူရင်းကိုသူတို့နိုင်ငံကနေအစားအစာအမေရိကန်များအတွက်အသစ်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်နိုင်သည်. နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, ဒါဟာတစ်နိုင်ငံလုံးအစားအစာကုန်တင်ကားများ၏အရေအတွက်ကြီးထွားလာ. သူတို့ဟာစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်အလွန်လူကြိုက်များ. သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးထမင်းချက်သို့မဟုတ်အရသာအစားအစာချက်ပြုတ်ရေးသူကိုတစ်စုံတစ်ဦးကသိလျှင်, ဒီစိတ်ကူးအပေါ်ပူးပေါင်းကြီးမြတ်ပါလိမ့်မယ်. တစ်ဦးကအစားအစာကိုထရပ်ကားလည်းကောင်းတစ်မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
အပေါ် Read incubadora က de Spice မီးဖိုချောင်: ဒုက္ခသည်များအစားအစာထရပ်ကားလုပ်ငန်းရှင်များဖြစ်နိုင်ပါတယ်
(ထို့ပြင်စာမျက်နှာ RCO လင့်ထားသည်) သင့်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ရန်ဘယ်လို?
လူအများစုဟာအစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံရရှိ, အထူးသဖြင့်စားသောက်ဆိုင်ထဲမှာ, အောက်ခြေကနေစတင်များနှင့်တဖြည်းဖြည်းတက်. ကောင်းသောအစားအစာဝန်ဆောင်မှုကိုသင်လေ့ကျင့်ရေးသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံကိုမရှိဘဲအများအပြားအလုပ်အကိုင်များရနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. ထိုကွောငျ့, သငျသညျချက်ချင်းအလုပ်လိုအပ်ခဲ့လျှင်, ပုံမှန်အားဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလုပ်သားများများအတွက်ဝယ်လိုအားရှိသောကြောင့်ထိုသို့အကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်. သင်တို့မူကား, ချက်ပြုတ်ဖို့ချစ်ကြလျှင်, ဒါမှမဟုတ်ခေါင်းဆောင်မှုအနေအထားသိမ်းပိုက်ချင်ပါတယ်, အခြို့သောအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်သို့မဟုတ်အတှေ့အကွုံအရပထမဦးဆုံးလိုအပ်.
Entry-level ကိုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်, လက်ထောက်အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှု, ပန်းကန်ဆေးစက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုစာသင်ခုံ, လေ့ကျင့်ရေးအထူးသဖြင့်လိုအပ်ပါသည်မျှ, ဒါပေမယ့်အထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာသင်အလုပ်တစ်ခုရဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်. အများစုမှာအလုပ်ရှင်များကဝန်ထမ်းသစ်များမှအလုပ်လေ့ကျင့်ရေးပေး.
အထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာရရှိရန်လေ့လာမှု - ဒုက္ခသည်စင်တာမှအွန်လိုင်းကနေအခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်းများ
အချို့သောတစ်ခါတလေစားဖိုမှူးစားသောက်ဆိုင်စားဖိုမှူးအချက်အပြုတ်သင်တန်းပေးခြင်းရရှိထားစဉ်တွင်, အခြားသူများကိုစားသောက်ဆိုင်ထဲမှာအလုပ်လုပ်သူတို့၏အတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့. အတော်များများက Entry-level ကိုရာထူးနှင့်အတူစတင်နှင့်လှေကားတက်ရွှေ့ဖို့ကွိုးစားအားထု.
သငျသညျစားသောက်ဆိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်, သငျသညျအခြို့သောအထောက်အထားများလိုအပ်ပါလိမ့်မည်. နှစ်နှစ်တစ်ကြာချိန်နှင့်အတူအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်ရရှိနိုင်အများအပြားသင်တန်းများရှိပါသည်.
စားသောက်ဆိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်အများအပြားအွန်လိုင်းအခွင့်အလမ်းများရှိပါတယ်. အွန်လိုင်းကျောင်းများသင်သည်သင်၏ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်လာအောင်ကူညီခြင်းနှင့်စားသောက်ဆိုင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်. ဥပမာအား, Coursera အများအပြားအွန်လိုင်းသင်တန်းများကမ်းလှမ်း:
အချက်အပြုတ်ကျောင်းများစားဖိုမှူးများနှင့်အခြားအစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်များများအတွက်သင်တန်းကိုတက်ရောက်ရန်ကမ်းလှမ်း. ဒီနေရာမှာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အချက်အပြုတ်သင်တန်းကျောင်းများ၏အွန်လိုင်း directory ကို
ယောဘသည် Corpsဒါဟာလူပျိုတို့နှင့်အမျိုးသမီးအခမဲ့ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေး, အသက်အရွယ် 16 တစ်ဦး 24 အသက်အနှစ်. သင့်ရဲ့အထဲက Check အစီအစဉ် အချက်အပြုတ်ဝိဇ္ဇာ.
သင်သည်အခြားတိုင်းပြည်တစ်အရည်အချင်းများသို့မဟုတ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအစားအစာဝန်ဆောင်မှုရှိပါက, Upwardly ကမ္တာ့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူကူညီပေးသည်, ဒုက္ခသည်များ, အလုပ်အခွင့်အာဏာဗီဇာအထူးလူဝင်မှု၏ asylees နှင့်ကိုင်ဆောင်သူ (SIVs) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုပြန်လည်စတင်ရန်.
သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေး Start. ဤတွင်အချို့ရွေးချယ်မှုများဖြစ်ကြသည်:
သင့်ဒေသခံအလုပ်အကိုင်စင်တာကိုသုံးပါ: တစ်ဦးချင်းစီမြို့ကအစိုးရအတွက်အလုပ်အကိုင်အစင်တာများအခမဲ့များမှာ. အဲဒီမှာအကွံဉာဏျပူဇော်နှင့်ဒေသခံအလုပ်အကိုင်များများစာရင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်. သူတို့ကကိုယ်ရေးရာဇဝင်နဲ့အလုပ် applications များနှင့်အတူကူညီ. သူတို့ကအလုပ်အစားအစာဝန်ဆောင်မှုများအတွက်သင်တန်းနှင့်ပညာရေးရန်သင့်အားဆက်သွယ်နိုင်သည်. ရှာတွေ့ သင့်ရဲ့အနီးဆုံးအလုပ်အကိုင်.
အင်တာနက်ကိုရှာရန်: com ကလူတစ်နာရီလျှင်အလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေကူညီပေးသည်တဲ့အလုပ် site ကိုဖြစ်ပါတယ်. ဤတွင်သင့်ရဲ့ဖွင့် အစားအစာနှင့်စားသောက်ဆိုင်များတွင်အလုပ်အကိုင်လက်ရှိစာရင်း.